माछापुच्छ्रे बैंकको रु. ३ अर्बको ऋणपत्रमा आजबाट आवेदन खुला, कति पाइन्छ ब्याज ? Bizshala -
माछापुच्छ्रे बैंकको रु. ३ अर्बको ऋणपत्रमा आजबाट आवेदन खुला, कति पाइन्छ ब्याज ?
काठमाण्डौ । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आज (असार ३१ गते) बाट आवेदन खुला गरिएको छ।
बैंकले ‘८.५ प्रतिशत माछापुच्छ्रे डिबेन्चर–२०८७’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३० लाख इकाइ ऋणपत्र जारी गरेको छ। जसमा १८ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी १२ लाख इकाइ भने सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ।
सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिएको कुल १२ लाख इकाइमध्ये पनि ५ प्रतिशतले हुन आउने ६० हजार इकाइ सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी ११ लाख ४० हजार इकाइमा सर्वसाधारणले खरिद आवेदन दिन सक्नेछन्।
लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ इकाइदेखि अधिकतममा ५ लाख इकाइसम्म खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। यो ऋणपत्रमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतपत्र प्राप्त आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ।
यो ऋणपत्रको निष्कासन बन्द छिटोमा साउन ४ गते र ढिलोमा साउन १७ गते बैंकिङ समयपछि हुने भनिएको छ।
माछापुच्छ्रेको ऋणपत्र १० वर्षे अवधिको हुनेछ। यसमा लगानीकर्ताले वार्षिक ८.५ प्रतिशत नै ब्याज पाउनेछन्।
ऋणपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेको छ।
machhapuchhre bank limited Debentures
काठमाण्डौ । नेपालको पूँजीबजारमा लगानीकर्ताहरुको फेरि अर्को संगठन...
काठमाण्डौ । साहस उर्जा लिमिटेडको आईपीओ निष्कासन भएको तेस्रो दिन...
प्राविधिक रुपमा ‘एसकेबीबीएल’ को सेयर बजारमा आगामी यात्रा
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । हाल नेपालमा ४३ वटा लघुवित्त...
दुई बैंकसहित ४ कम्पनीका सेयरमा बोलपत्र पेस गर्ने आज अन्तिम
काठमाण्डौ । लिलामीमा राखिएका दुई वाणिज्य बैंकसहित ४ कम्पनीका सेयर...
लगानीकर्ताले बन्धक बनाएकै हुन् ? निरज गिरीको जवाफ यस्तो
काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डका कार्यबाहक अध्यक्ष निरज गिरीले...
न्यादी हाइड्रोपावरको रु. २२.५ करोडको आईपीओ असोज १५ बाट
काठमाण्डौ । न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले यही असोज १५ गतेबाट रु. २२...
रोहन कार्की भन्छन्-'धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले भ्रम छरे'
काठमाण्डौ । पूँजीबजार सुधार संघर्ष समितिका संयोजक रोहन कार्कीले...
धिबोका कर्मचारीलाई बन्धक बनाएर सहमति गराइएको आरोप, दोषीमाथि
काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरुलाई पूँजीबजार सुधार...